साहित्य Archives - Page 36 of 36 - Samudrapari.com
जता भत्क्यो उतै दैलो (गजल)
जता भत्क्यो उतै दैलो भन्ने बेला आयो एकाघरकै मान्छे पराइ बन्ने बेला आयो । जिजिबिषा संगालेर नानाथरी चाहनाका झिसमिसेमै तारामण्डल गन्ने बेला आयो । न आदर छ न माया छ, खालि द्वेष मात्र ब्यथा बिनै, बाहनामा कन्ने बेला आयो । बिना थिति बिना रिति, कुसंस्कार गहिरिदा कौमार्यमै मानसपुत्र जन्ने बेला आयो । तन्मयले सिंचेको त्यो स्वप्न बाटिकाको मालिले नै 'भीम'को जरा खन्ने बेला आयो ।
जनताको पाउ समाउ
देश बनाउँछु भनेर भोट माग्यौ त्यही आशा र विश्वासमा भोट दियौं चुनाव जिताइ फुलमाला लगाइ दरबार पठायौं निरन्तर माग्छौ नेताहरु केही नभएझैं जनताहरु दिन्छौ सँधै के के नै भएझैँ आज नेताहरुसँग यातायातको लागि गुड्ने गाडि देखि परि आए उड्ने सरकारी ढुकुटीको व्यवस्था छन् बस्नका लागि बगैँचासहित सुविधा सम्पन्न महल छन् जहाँ जाउँ अघिपछि सुरक्षाको घेरा छन् । तर जनता हाम्रो लागि शान्ति सुरक्षा, महल सुविधा त कुरै छोडौं रोग र भोकले सताइरहेछ रोग र भोकमा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताक...
दशैं आऊ शुभकामना
हिमाल पहाडको काखमा, हिमनदी बगाउंदै लाली गुरांस र लालुपाते फक्राउँदै नयां ॠतुको बासना बोकी टीका, जमरा लिएर आऊ दशैं शुभकामना । लाहुरे र प्रदेशी लाई स्वदेश निम्त्याउँदै, घर आंगन लिपपोत सकी मखमली फुलाउँदै पिङका सर्कामा हल्लीँदै, आकाश छुँदै निदार भरी आशिर्बाद का टीका प्रसाद दिनलाई दशैं आऊ , शुभकामना छ । हिलो मैलो सुकाउँदै, शरद ॠतु को प्रचन्ड प्रकाशको कीरण बनेर संबृद्द रामराज्यको पाइला चाल्दै आऊ एकता को सूर्य चन्द्र लाई दाहीने पार्दै ...
छोरी पिकनिक र छोरा साथीहरूसँग स्वीमिङ्ग गएका थिए अनि श्रीमान् कलेजको मिटिङ्गमा। घरमा सघाउने नानी लुगा धुँदै थिई। टिभी हेर्न बत्ती थिएन। के गरुँ के गरुँ हुँदै छोरीको कोठामा छिरेँ। लथालिङ्ग तन्ना, किताब र कपडाहरू यत्रतत्र छरिएका रहेछन्। आज छोरीलाई सरप्राइज दिन भनेर मिलाउन थालेँ। सामानहरू यथास्थानमा मिलाएर तन्ना फेरिदिएँ। झयालका शिशाहरू पुछिसक्दा अलि थाके जस्तो भयो। यसो बेडमा पल्टेको सिरानी अग्लो जस्तो लाग्यो, छोरीको डायरी रहेछ। गल्ती गर्दैछु भन्ने थाहा हुँदा-हुँदै पनि पढ्न थालेँ। २६ असोज कलेज...
पोहर पनि आयौ परार पनि आयौ यसपाली त कुनै हालतमा नआउनु भनेकोथे तिमी त यसपाली झन गर्बकासाथ गडगडाहट आयौ आउनु नै थियो भने पनि जनकपुरको रेल झै आउनु नि तिमी त अल्लारे ठिटाठिटी झै ढकढकाहट आयौ यदी आउने नै हो भने पनि, आउँदा पोहरको जस्तो बोइलर कुखरा र लोकल ठर्रा होइन राँगो बोकाको साथ झक्कले अनि अक्कले खसी ल्याउनु परार जस्तो फाटेको टोपी अनि टालेको सुरुवाल होइन सर्हाबहारा नेताले जस्तो टाइसुट र बिदेशी बुट ल्याउनु नेता फुटे पनि पार्टी फ़ुटे पनि जनतामा सदा एकजुट ल्याउनु सकिन्छ भने तरुनी...
उनले सोच्दै गर्दाको एनआरएन र उनले श्रृजना गरेको एनआरएन एउटै हुनसक्छ । अस्तिवाट फेरिएको रुपको एनआरएन र हिजोवाट वदलिएको एनआरएन पनि एउटै हुनसक्छ । तर दुःखको कुरा, श्रृजना गर्दाको एनआरएन र अस्ति हिजोको एनआरएनमा भिन्नाता छ । एउटा मार्ग चित्र कोरेर जन्माइएको एनआरएन आज अर्कै मार्गरेखा कोर्न खोजेको देखिन्छ । तर खुशीको कुरा.... जन्मदाको एनआरएनको उद्देश्य र तिमीले भनिरहेको भोलिको एनआरएनमा एकरुपता छ । त्येसैले मलाइ विश्वास छ ..... जन्मदाको उनको विचारको एनआरएनले...
घर पुग्न बिहान र बेलुका दुइ घन्टा नछुट्टाए हुन्न ! मैले अरु सबै समय काममा लाए नि यी दुइ घन्टा पर्छन् विशेष । जागिर, भेटघाट र किनमेल एउटै कालखण्डमा गाभ्ने गर्छु । तर घरबाट निस्कँदा र घर पुग्दाको दुई घन्टा विशेष हुन् मेरा निम्ति । यो बाटो म्यादले समग्र जीवन चलेको छ मेरो । मैले बाटो छुटाउनै पर्छ अन्यथा सारा योजना लथालिङ्ग हुन्छ, ल्याङफ्याङ हुन्छ र लल्याकलुलुक हुन्छ । यसैले सबै खाले लथालिङ्ग, ल्याङफ्याङ र लल्याकलुलुकबाट जोगिनँ मैले बाटाका लागि समय नछुट्टाईकन धरै छैन । पुरापुरा दुई...
मुनामदनको विक्री उस्तै
काठमाडौं- 'क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन, मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन ! जस्ता अनेकौँ युगान्तकारी तथा कालजयी हरफहरु समेटिएका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अमर कृति 'मुनामदन'ले नेपालका पुस्तक बिक्रीमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । साझा प्रकाशनका प्रकाशन विभागका प्रमुख दामोदर कोइरालाका अनुसार हालसम्म 'मुनामदन'को बिक्री पाँच लाख प्रति नाघिसकेको छ । साझा प्रकाशनले पछिल्लोपटक सो खण्डकाव्यको २५ औँ संस्करण वि.सं. २०६५ मा एक लाख प्रति छापेको थियो । यसभन्दा अगाडि पनि साझा प्रकाशन...